Fihetseham-po momba ny varotra Forex; nohazavaina sy noresahana - Fizarana 1 | FXCC
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - forex basics articles - Fihetseham-po momba ny varotra Forex; Nifampiresaka sy niparitaka - Fizarana 1
Fihetseham-po momba ny varotra Forex; Nifampiresaka sy niparitaka - Fizarana 1
Na mahita ny asan'ny sehatry ny varotra antserasera amin'ny alàlan'ny loza na ny famolavolana isika dia biby sosialy ary ao amin'ny tontolo media sosialy no iainantsika amin'izao fotoana izao, ho hitantsika ny sehatra fiadian-kevitra sy media sosialy hafa hafa, hizarana sy hiresahana momba ny hevitra ara-barotra ataontsika. Rehefa mahita sehatra fiadian-kevitra sy sehatra fifanakalozan-dresaka hafa isika, dia ho hitantsika fa misy ny fisamborana sasany. Ny endriky ny vondron'olona iray dia mieritreritra fa ny fandrosoana dia handroso sy handresy lohahevitra sasany; "Ity asa ity, tsy izany, aza manao izany, aza manao an'izany, aza miraharaha izany, tandremo sao" ...
Ity antokon'olom-bitsy ity dia mety hanjary henjana sy handresy lahatra ary indraindray, raha misy mpandray anjara matotra manohana hevitra manokana, na mandresy lahatra ireo mpandray anjara mahefa mba hanao izany, dia ho voavela ianao raha mino fa ny fotsy hoditra dia tena fotsy ary lavo. Raha misy olona manandrana miala amin'ny fisainana, na dia izy ireo aza marina, afaka mihaona miaraka amina sehatra marobe izy ireo, indrindra raha toa ka vaovao amin'ny adihevitra.
Ny hafatra dia manan-danja kokoa noho ny fivoahana, na ny mifamadika amin'izay
Ny mpivarotra novokarina dia hikendry amin'ny paikady fampidiran-drivotra, mety ho endri-tsoratra ara-teknika izay, rehefa mampifanaraka amin'ny fifampiraharahana tanteraka izy ireo dia mametraka ny mari-pamantarana tonga lafatra hiditra. Inona àry no mitranga manaraka? Rahoviana ianao no mivoaka, aiza ny vidin'ny tanjonao, inona no mety hampidi-doza anao amin'ny varotra / aiza no ametrahanao ny fijanonana?
Na iza na iza dia afaka manondro ny mpitarika amin'izao fotoana izao ny hazakazaka iray, tsy misy olona manana antoka azo antoka, afaka maminavina hoe iza no handresy ny hazakazaka raha ny antsasaky ny lalana. Miala amin'ny laharana mitovy amin'ny loha-laharana, izay mitovy laharana amin'ny fitantanana ny varotra ankapobeny. Mila manana antony hiditra ao amin'ny tsena isika ary mila manana antony hivoahana isika. Inona no mety hitranga amintsika? Ny famantarana ny fidirana dia mety mitovitovy (ao ambadik'izany) mankany amin'ny famantarana miafina.
Tsy azo atao ny maminavina ny tombam-bidin'ny vidiny
Eny ary tsia, raha azo antoka tanteraka ny tsenan'ny lozam-pifamoivoizanay dia tsy ho tsena izany, mety ho tapakila vola azonay hiketrika na tsy hiditra amin'ny sitrapo. Azontsika atao ny mandray fepetra ara-drariny mifototra amin'ny, ohatra, ny porofo ara-tantara, ireo sary vao haingana hita ao amin'ny tabilao, ny fanadihadiana fototra sy ara-teknika. Mifototra amin'ireo fitsaràna ara-drariny ireo, tokony ho azontsika ny hampisy vidiny mety Mandrindra ny fotoana fohy sy midina. Ny faminanianay momba ny vidin'ny loka, tsy voatery ho toy ny vola madinika, dia mety hiorina amin'ny fitaovana sy ny siansa azontsika.
Ny taham-pahafatesana avo dia manome antoka ny fahombiazana
Ny taham-pahaizana ambony kokoa dia tsy voatery handika amin'ny tombombarotra, raha mandany enina avy amin'ny varotra tsirairay alaintsika isika, mamoy telo ary mamaky na dia iray monja, fa ny fahavoazantsika dia avo roa heny na mihoatra ny tombony azontsika , na very vola. Araka ny efa voalaza imbetsaka; Na dia 50: Xnumx fandresena aza dia mety hahomby raha mahazo tombony, ohatra, € 50 isaky ny varotra mandresy, fa fotsiny very 200 amin'ny varotra isan-karazany.
Hahazo tombontsoa bebe kokoa ny valisoa lehibe
Tokony hamantatra ny mety hitranga isika, inona no azo atao ary inona no tena tsy azo inoana ary hanangana tetikady araka ny tranga toy izany. Ho an'ny mpivady ho an'ny currency forongona ny 1% amin'ny andro dia tsy fisehoan-javatra matetika. Mety mitranga indray mandeha isan-kerinandro; amin'ny alàlan'ny famoahana kalitao fototra tsy hita na milefitra amin'ny toetr'andro, na ny hetsika ara-politika mihoam-pandrosoana. Noho izany, manantena ny hampiasa tetikady ara-barotra andro iray isan-andro, mba hividy amin'ny tsenan'ny 1% raha mihazakazaka mpivarotra vola iray ianao, nefa mampiasa risika 0.5% fotsiny, dia ambony noho ny fanantenana. Tsy maintsy manao raharaham-barotra amin'ny fitondran-tena isika ary fantatsika fa farafaharatsiny lavitra noho ny firoboroboany ny tsenam-barotra, noho izany dia mety hampivelatra ny tsenan'ny 3% ao anatin'ny volana iray mety ho iray volana, noho izany dia hojerentsika ny mety hahatonga ny 1.5% amin'ny kaonty kaonty hahazoana 3% fitomboana, sa tokony hanao risika 1: 1?
Ny fanandramana ihany no hampiseho ny halehiben'ny alahelontsika, saingy tsy misy porofo manamarina fa ny taham-pahafatesana lehibe dia hanome valisoa lehibe kokoa.